अनपर्पोज्ड लव – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७३ मंसिर २३ गते ५:१८ मा प्रकाशित
“खै देखाउ त हेरौं !”
उनले थोरै नजिक आउदै भनिन।
मैले आफ्नो हातको कुहिनो तिर अर्को हातले इसारा गर्दै भने,
” उ यहाँ… “
सानो बच्चा झैं उनको कुरा मानेर सट्टको बाउला थोरै माथी सारि कुहिनोमा लागेको घाउ देखाइ दिँए।
मैले घाउ मा रगत जम्मा भए जस्तो भएको थियो। उनले त्यो देख्ने बित्तिकै चिन्तित स्वरमा भनिन
“ला….. घाउ नै भएछ!
बाटो कस्तो छ नहेरी बस्यो अनि त..”
मलाइ भन्न मन थियो कि,
“म त तिमिलाइ हेर्दै थिएं” तर सकिन अनि चुपचाप बसि रहें केही नबोली।
उनी सिटबाट जुरुक्क उठेर “पख है एकछिन” भन्दै अाफ्नो झोला खोल्न थालिन ।म चुपचाप कुहिनोको चोट सुम्सुम्याउदै हेरीरहे ।उ लगत्तै हातमा एउटा गाउँको लोकल तोरीको तेल बोक्दै् अाइपुगि र बोलि
“यो लगाउनु पर्छ अनि रगत जम्मा भई निलो डाम बस्दैन ।”
अग्रजहरुले चलाएको नियम रैछ ।कलेजमा पहिलो बर्ष पिक्निक, दोस्रो बर्ष इन्द्रष्टि भिजिट !हामी पहिलो बर्ष काभ्रेको धुलिखेल गएका थियौ ।त्यो बर्षको सुरु भएर होला साथीहरु त्यति नजिक नभैसकेकाले पनि त्यो पिक्निक सम्झनामा मात्र सिमित भयो ,केहि फोटा हरु क्यामरामा कैद सम्म हुन भ्याए मात्र !
दोस्रो बर्ष शुरुु हुँदासम्म सबै साथी नजिक हुदै गयौ ,हाम्रो एउटा ग्रुप बन्यो जसमा हामी ७ जना साथी थियौ।शुक्रबार कलेज सके पछि कहिले कहाँ कहिले कहाँ घुम्ने प्लालान वन्न थाले ।सबै उस्तै ,घुम्ने भने पछि ‘नाँई’ कसैको मुख बाट अाउदैन्थ्यो।यसै बिच कलेजमा टुर जाने कुरा चल्यो र फिक्स पनि भयो काठमाडौ बाट चितवान हुदै पहिलो दिन लुम्बिनी बस्ने अर्को दिन बुटवल पाल्पा हुदै पोखरा अनि काठमाडौ पाँच दिनको दुर फिक्स भयो । काठमाडौ बाट यात्रा शुरु भो जाँदै गर्दा बाटोमा खुसी अनि उनका साथिहरु संगै बसेका थिए ।म अगाडिको सिटमा थिए , यात्रा रमाईलो हुदै थियो कोहि साथीहरु बसको झ्यालबाट प्रकृतिका सुन्दर दृश्यहरु क्यामेरामा कैद गर्नमै बेस्थ देखिन्थे ।
हामी चितवनको टाईम फार्मा , सौरहा जस्ता रमणिय स्थल भ्रमण पछि लुम्बिनिको बाटो तय गर्दै थियौँ। मेरो दिमागमा भने ‘खुसि’ थिई। मलाइ खुसी पट्टि फर्केर हेर्न मन लाग्यो। गुरु जि ले गाडि अगाडि बढाउँदै थिए ,कोहि साथी डान्स त कोहि गित गाउदै थिए ।मैले भने नजर उनिहरु तिर घुमाँए। त्यति नै बेला बस दुङ्गामा व ब्रकर कि खाल्डाखुल्डीमा परेछ क्यार मेरो हात झ्यालको डण्डीमा थियो।
ठोक्किन नि नराम्ररी ठोक्कियो!अषाध्यै दुखेर आँसु मात्र झार्न भने सकेेको थिएन। साथिहरु मलाइ हेरेर गलल हाँसेँ तर उ भने अँध्यारो अनुहार पारेर म पट्टि हेरिरहि ,केही बोल्न्न सकिन । दुखाइले रन्थनिएको म चुपचाप त्यही बसि रहेको थिँँए । केही बेरमा उ अर्थात खुसी मेरो छेउमा आइ पुगि। मेरै सिटको अर्को साईडमा बस्दै उस् भनि,
“धेरै चोट लाग्यो हो?”
मैले केही नभए झै थोरै हांस्दै भने ,
“छैन खासै, अलि अलि मात्र।”
उनले अलिक कडा स्वरमा भनि
“झुट नबोलन, कहाँ ठोक्कियो भन त?” त्यसपछिका कुरा थिए यी सव.
मैले मेरा हात उनी तिर बढाउंदै भनेँ
“खै लेउ म लगाउंछु।”
उनले तेल मलाइ नदिइ मेरो नजिकै आइन अनि भनिन “खै म आफै लगाइ दिन्छु।”
मैले “नाइ” भन्न सकिन। उनले तेल खोलेर मेरो घाउमा हल्का मालिस गरि दिइन । त्यति बेला लुम्बिनी पुग्दा अँध्यारो भैसकेको थियो । म उठेर झोला समाएर अोर्लिन खोजे तर घाउ झनै चर्कियो अनि फेरि थचक्क सिटमा नै बसेर भनें,
“तिमी जाउ, म एक छिन पछि मात्र आउंछु।”
उ केही बोलीन निकै बेर सम्म उभिइ रहि मलाइ एकतमास हेरेर।
केही बेरपछी फेरि बोलिन
“तिमी एक्लै के गरेर बस्छौ?, म पनि बस्छु बरु भित्र गएर बसौं न, सरले देख्नु हुन्छ फेरि…. ।”
म उनको कुरालाइ स्विकार्दै होटल भित्र रहेको सानो क्याभिनमा गएर बसें। उनी पनि मेरो पछिपछि आएर मेरो अगाडिको कुर्शिमा बसिन। साथीहरु अाफ्नो अाफ्नो सुरमा थिए होटल पहिला नै बुक गरिएको रहेछ ।खाना खाने समय नहुन्जे्ल हामी त्यहि बसि रह्यौ र पनि बोलचाल भएन खासै । घरी घरी हामी एक अर्काको अनुहारमा हेर्थ्यौ अनि नजर जुद्धा अफ्ठेरो मान्दै आँखा झुकाउथ्यौं भुइं तिर।
साथीहरु “खानाखाने हैन ?”
भन्दै बलाउन अाए हामी दुबै एकै पटक खाना खान बस्दा सबैले हामिलाइ अनौठो तरिकाले हेर्दै हांस्न थाले। हामी दुबै जना केही नबोली आ-आफ्नो तरिकाले बस्यौं।
मलाइ याद छैन म उनलाइ कहिले देखि मन पराउथेँ! त्यै दिनहरु देखि म उनलाइ माया गर्न थालेको थिएं मनमनै । कलेज होस या त कलेज बाहिर म उनलाइ हेरि रहन्थे। उनी पनि घरीघरी म पटि फर्केर हेरि रहेको देख्थे म मनमा खुसि लाग्थ्यो । उमेर नै कलिलो भएर हो या त हाम्रो स्वभाव त्यस्तै भएर हो हामी एक अर्का संग खासै कुरा गर्न भने सक्दैनथ्यौं। कहिले काँही फाट्टफुट्ट हामी बोल्ने गर्थ्यौ तर ती कुरा हरु एकदमै सामान्य अनि औपचारिक मात्र हुने गर्थे। तथापि मुखले बोल्ने कुनै जरुरत नै थिएन कहिले काही जुध्ने हाम्रा नजरहरुले नै सबैकुरा बोली दिन्थे।
मैले सपना देखि सकेको थिएं , उनलाइ कुनै दिन आफ्नी जीवन साथी बनाउने। म मनमनै उनलाइ आफ्नो बनाएको कल्पना गर्थे मनमा सजाँउथे अनि रमाउँथे। मनमा त्यती धेरै माया भएर पनि मैले कहिले उनलाइ भन्न सकिन
“म तिमिलाइ माया गर्छु”
भनेर। उनी त झन छोरी मान्छे, उनले भन्ने कुरै भएन।त्यो लव मन परेर पनि पर्पोज्ड नै नभई सकियो र पनि सम्झनामा अाईरहन्छ।